Tobankii sano ee la soo dhaafay ayaa arkay rag iyo dumar badan oo loo eegeynin da'dooda u jeestay shukaansiga online. Sida laga soo xigtay cilmi baaris la sameeyay bishii July, 2014, dalka ayaa hadda leh 41,250,000 dadka isku dayeen shukaansiga online at hal dhibic ka mid ah noloshooda.
Markii la tixgaliyo dadweynaha iminka ku nool Mareykanka waa 361.1 million, Waxa la odhan karaa in fikradda shukaansiga online u suurtagashay in ay ku biiritaankiisa ka badan 11% qof oo ku nool dalka. Sidaas, waxa samayno 11% dadka ka hadlaan marka ay ku kulmaan oo ay yihiin ee ku iman kara online?
Wada hadal ayaa dhab bilaabmaa badan ka hor dadka la kulmi midba midka kale ku ah goobta shukaansiga online. Si loo kordhiyo fursadaha aad ku heli lammaanaha xaq aad, waa inaad leedahay profile kaamil ah, profile u hadlaa naftaada. Waa in ay qaadaan horyaalka dilaaga ah, sawiro aad ugu fiican iyo warbixin qaar ka mid ah dadka aad rabto in aad ogaato ka hor inta dhab bandhigeysa xiisaha ay u sheekada aad la. Haddii aad qabto profile kaamil ah, fursado aad kula kulmi qof kaamil ah online noqon doonaa inta ka sareeya.
Imminka mar haddii aad heshay kooxo si ay uga hadlaan su aashu waa waxa mawduucyada ugu fiican sheekaysta ku jira. Halkan waxaa ku qoran dhowr talooyin ku saabsan mawduucyo shukaansiga online wada hadalka.
Waxaa jira dhowr ah oo aan jeclaan bogaadin. Sidaas, waxaad bilaabi kartaa wadahadalka by ammaanayaa qofka kale. Sida ugu fiican waa in ay bilaabaan by ammaanaya doorashooyin ka sameeyey xaggiisa / iyada. Tusaale ahaan, waxaad ammaani karo doorashada qofka oo cunto ah, dhadhansiineeynaa music, iwm. Tani waxay ka dhigi doonaa lamaanahaaga iman kara fahamsanahay in aad si dhab ah u saaray in badan oo dadaal inaad akhrido marayo isaga / iyada profile.
Reading astaanta shukaansi online shakhsi ah ayaa sidoo kale u oggolaan doonaa inaad ogaato oo ku saabsan maadooyinka uu / ay xiiseyneyso. Iyaga From, qaado oo ah mowduucyada sidoo kale aad xiiso iyo sidii wada hadal dadkii xeradu guurayaan,, hadalka bilaabin iyaga ku. Tani chat ka sii xiiso labada dhinac dhigi doonaa. Haddii aadan wadaagaan dan kasta oo leh qof gaar ah, isagu / iyadu u badan tahay waa kuma qofka xaq u leeyahay inuu taariikhda.
Life oo dhan
Sida aad bilowdo inaad si raaxo leh loogu sheekeeyo qofka, waxaad bilaabi kartaa hadlayaan oo ku saabsan nolosha. Waxaa jiri kara wada hadallada ku saabsan waxyaabaha aad qabatay ee nolosha, ujeedooyinka aad nolosha, nooc ka mid ah carruurnimada aad lahayd, iyo wixii la mid ah. Si tartiib ah sida uu qofka kale ka bilaabataa ka qabaneysaa iyada oo la wadaago sheekooyin ah uu naftiisa / teeda, waxaad ka heli doontaa chat ka noqonaya mid aad iyo aad u xiiso badan. Sida habboon, in aadan hadalka bilaabin qaatay xidhiidhadho hore iyo intii ay marka hore ka sheekeystaan ​​aad qabto; mowduucyada sida in laga wada hadlo marka laba idinka mid bilaabaan fahamka kasta oo kale oo si fiican u.
Inta badan daters online jecel kulmeysaa dad ka dhigi kartaa qosleen; u taagan eegin dhabta ah ee jinsiga ah ay ka soo jeedaan. Sidaas, wadaaga dhowr digtoonaan hal-bacaha iyo kaftanka waa hab fiican oo ah sheeko ka sii badnaa. Weligaa ha isku dayin in ay cheesy oo aad kaftan, iyo sidoo kale iska ilaali samaynta xiiso of qofka aad Wadahadalada ay la.
Online mawduucyo wada hadalka shukaansiga u muuqdaan in ay ku kala duwan yihiin iyada oo ku xiran dhadhankoodu, taariikhda waxbarasho iyo da'da dadka. Sidaas, marka aad dooranayso mawduuc wadahadalka inta lagu jiro taariikhda internet ah waa in aad sii arrimahan ku hay.